कसरी सुत्नेकाे कस्ताे हुन्छ व्यक्तित्व, अध्ययनले के भन्छ ?
काठमाडाैं। मान्छेकाे सुत्ने शैलीले उसकाे व्यक्तित्व पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले, यदि तपाईं कसैको व्यक्तिगत विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने ऊ सुतिरहेको अवस्था हेर्नुस्। एक हजारभन्दा धेरै व्यक्तिको संलग्नतामा व्यक्तित्वको र सयन–स्थितिका बारेमा स्कटल्यान्डमा एउटा अध्ययन गरिएको थियो, जसले व्यक्तित्व र सुत्ने शैलीका विषयमा धेरै कुराको जानकारी दिएकाे छ।
तर, सुप्त अवस्थामा व्यक्तिको व्यक्तिगत सजगता नहुने भएकाले सयन–आसनबाटै उसको सही व्यक्तित्वको धेर–थोर जानकारी लिन सकिन्छ। प्रोफेसर क्रिसका अनुसार सयन शैलीका ६ मुख्य आसन र व्यक्तिको व्यक्तित्व यस प्रकार छः
फिटसः यो गर्भास्थ शिशुको जस्तो दायाँ वा बायाँतिर कोल्टे परी टाउको, हात र खुट्टा खुम्च्याएर सुत्ने स्थिति हो। यो स्थिति प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु बाहिर धेरै कठोर तर आन्तरिक रुपले अत्यन्त कोमल मन भएको पाइएको छ। यस्ता व्यक्ति पहिलो पल्ट कसैसँग मिल्दा धेरै नखुल्ने, अल्पभाषी र लज्जालु लाग्न सक्छन् । तर, सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएपछि चाँढै सामान्य भई घुलमिल हुन थाल्दछन्। यो आसनको सबैभन्दा सामान्य स्थिति हो।
प्रा. क्रिसको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पुरुषभन्दा महिलामा प्रचलित सयन स्थिति प्रयोग गर्नेहरुको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ। । फिटस स्थितिमा बायाँपट्टि कोल्टे परेर सुत्नेहरुमा आमाशय, कलेजो र फोक्सो जस्ता अति संवेदनशील अंगहरुमा केही न केही समस्या भएको पनि पाइएको छ भने दायाँपट्टि कोल्टे परेर सुत्नेहरु तुलनात्मक रुपले स्वस्थ पाइएको छ।
यार्नरः सर्वेक्षणमा सामेल भएकामध्ये १३ प्रतिशतले यो सयन विधि अपनाइएको पाइएकाे थियाे। यस्ता व्यक्तिहरु खुट्टा नखुम्च्याई कोल्टे परेर, हातलाई शरीरको लम्बवत, अगाडिपट्टि सिधै वा हल्का मोडेर सुत्ने गर्छन्। यो स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु खुला मिजासका तर संदिग्ध तथा सन्काहा मनस्थितिका, निर्णय गर्न लामो समय लिने तर एकपटक निर्णय लिइसकेपछि सायदै बदल्ने, हरेक घटना र परिस्थितिलाई फाइदा–बेफाइदाको तराजुमा तौलिने र नयाँ कुरा तुरुन्त सिक्न सक्ने क्षमताका हुन्छन्। प्रा क्रिसका अनुसार यो सयन विधि अपनाउनेहरुमा एसिडिटी र निद्रामा निसास्सिने समस्या धेरै पाइएको छ।
स्टारफिसः सर्वेक्षणमा सामेल व्यक्तिहरुमध्ये यस आसनमा सुत्नेहरुको सहभागिता ५ प्रतिशत थियो। यस स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु सहयोगी भएकाले प्रायः राम्रा मित्र साबित हुन्छन्। यो स्थितिमा ढाडको बलले, उत्तानो परी, खुट्टा फट्याएर, हात तकियाको आसपासमा राखी स्टारफिस माछाको आकृतिमा सुत्ने गरिन्छ। यो सयन विधि अपनाउनेहरु प्रायः सबैको कुरा सुन्न तयार हुन्छन्। यिनीहरु आकर्षणको केन्द्र बन्न चाहँदैनन्। स्टारफिस स्थितिमा सुत्नेहरुमा घुर्ने, दुस्वप्न देख्ने र निद्रामा निसास्सिने समस्याबाट ग्रसित भएको पाइयो।
कता फर्केर सुत्ने ?
मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा निन्द्राको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। साथै, सुत्ने समय र सुत्ने तरिकाले पनि तपाईँको स्वास्थ्यमा उत्तिकै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। सुत्ने तरिकाले तपाईँकै स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, साथसाथै तपाईँको छालालाई स्वस्थ बनाउन र पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउनको लागि आफ्नो सुत्ने तरिकालाई सुधार्नु जरुरी हुन्छ।
कुन साइड फर्केर सुत्ने भन्ने कुराले मानिसलाई धेरै प्रभाव पार्दछ । सुत्ने धेरै तरिकाहरू छन् ढाड तर्फबाट, छाती तर्फबाट, दायाँ फर्केर र बायाँ फर्केर र यो सबैले तपाईँको स्वास्थ्यमा असर गर्दछ। माथि फर्केर अथवा ढाड तल पारेर सुत्नु विशेष गरी दम भएकाहरूको लागि खतरनाक हुन्छ, किनकी यसरी सुत्दा तपाईँको स्वासप्रश्वासमा बाधा पुर्याउँदछ। तथापि उत्तानो परेर सुत्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ।
दाहिने फर्केर सुत्नाले तपाईँको पाचन प्रक्रियालाई बिगार्दछ, ग्यास्ट्रिक बढ्छ भने देब्रे फर्केर सुत्नाले भित्रीअंग कलेजो, पेट, फोक्सोमा दबाब पुग्छ तर पाचन प्रक्रिया भने सुधार्छ। गर्भवति महिलालाई रक्तस्राव कम होस् भनि देब्रे फर्केर सुत्न सल्लाह दिने गरिन्छ।
देब्रे फर्केर सुत्दा स्वास्थ्य स्थितीमा सुधार हुने र मानिसको जीवन पनि बच्न सक्ने चिकित्सकहरूको धारणा रहेको छ। हलिस्टिक चिकित्सा विधिमा शरीरको देब्रे भागलाई लसीकाको प्रवल पक्ष मानिन्छ, र देब्रे तर्फ फर्केर सुतेको बेला तपाईँको शरीरले विषादी, लसीका तरल पदार्थ र फोहोरहरूलाई फिल्टर गर्न बढी समय पाउँदछ। थोरासिक डक्ट र लसीका नोडको सहायताले यो फिल्टर कार्य भैरहेको हुन्छ।
तर, दाहिने फर्केर सुत्नाले तपाईँको लसीका प्रणाली ९ ले ढिलो काम गर्दछ, र यस्तो हुनु खतरनाक मानिन्छ। किनभने, यसरी ढिलो काम गर्ने लसीका प्रणालीले तपाईँको शरीरमा भएका विषादीहरूलाई फिल्टर गर्न सक्दैन र लसीका तरल पदार्थलाई शरीरभरी फैलाउन असमर्थ हुन्छ। यसरी शरीरमा विषादी जम्मा हुँदै गएपछि खतरनाक समस्याहरू आउन सक्छन्।
Tagsव्यक्तित्वकाे पहिचान सुताइका तरिका